Inflation nightmare returns to haunt Zimbabwe - Welcome To Newsnowmagazines
Home / Zimbabwe / Inflation nightmare returns to haunt Zimbabwe
The disparity between the official and parallel market exchange rates has been rapidly widening, triggering price hikes of up to 300 percent. The chief of the Zimbabwe Congress of Trade Unions, Japhet Moyo, recalls meeting a man who saw the price of medicine for his chronic illness rise so much in two months that it now costs almost his entire salary.
"We are not talking about manufacturing an aeroplane here. We are talking about saving scarce foreign currency by growing wheat to bake our bread and soya beans to produce our own cooking oil." Confederation of Zimbabwe Industries leader Sifelani Jabangwe said the government needs to channel scarce foreign currency to shore up distressed manufacturers.
In January of this year the president imposed a more than 100-percent fuel price hike -- purportedly to ease the shortages -- but that sparked countrywide demonstrations that left at least 17 people dead when soldiers opened fire on the protesters.Confederation of Zimbabwe Industries leader Sifelani Jabangwe said the government needs to channel scarce foreign currency to shore up distressed manufacturers.
Inhumane, unethical, unpatriotic'
Inflation nightmare returns to haunt Zimbabwe Reviewed by opeyemi on 6:39:00 am Rating: 5